Taariikh Nololeedka Atirishada Bollywood-ka Ugu Awooda Badan 20-Sano Ee Ugu Dambeesay Kareena Kapoor Khan (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » Taariikh Nololeedka Atirishada Bollywood-ka Ugu Awooda Badan 20-Sano Ee Ugu Dambeesay Kareena Kapoor Khan (+Sawiro)
Dhalasho Wacan Kareena Kapoor Oo Maanta 37-sano Jirsatay iyo Taariikhdeeda oo Update Ah Hoos Kaga Bogo:
21 September waa maalin qaas u ah Kareena Kapoor sidaa darteed macluumaad badan ayaa laga soo bandhigay waxaana jecleesanay boqorada Bollywood-ka maalinteeda gaarka ah inaan xusno.
Kareena Kapoor Khan waa atirisho Hindi ah sidoo kalena Bollywood-ka kusoo biirtay sanadii 2000 soona martay marxalado kala duwan ilaa ay noqoto atirishada Bollywood-ka ugu awooda badan.
Kareena waxay leehan maqaam u gaar ah madaama ay sanado badan ahayd atirishada lacagaha ugu badan filimada ku sameyso.
Sidoo kalena shabakada Boxoffice India xogteedii ugu dambeesay waxaa lagu xaqiijiyay inay tahay atirishada ugu awooda badan Bollywood-ka 20-sano ee ugu dambeesay madaama guulaha dhanka filimada gaartay aysan jirin atirisho gaartay!
Kareena Kapoor qaab jilinkeeda aadka u wanagsan iyo kartideeda ay door walbo ku jili karto waxay ku muteesatay inay ku guuleesatay 6-biladoodo oo kala duwan oo ay bixiso shirkada caanka ah ee Filmfare Awards.
Daraasad ay sameesat Times of India waxaa lagu sheegay in Kareena Kapoor ay tahay atirishada ugu caansan Bollywood-ka 15-sano ee ugu dambeesay waxaana xogtan lagu saleeyay dadka dunida ku nool araah laga qaaday oo ay ku doorteen in Kareena Kapoor ay tahay gabadha ugu caansan Bollywood-ka!
Kareena Kapoor seygeeda waa Saif Ali Khan waxayna aqal galeen sanadii 2012 waxaana u joogo lamaahana caanka ah wiil lagu magacaabo Taimaur Ali Khan oo dhashay 20 December 2016, xidigtan nolosheeda ka baxsan dhanka fanka leedahay hadal heyn iyo xiiso gaar ah.
Kareena waxay caan ku tahay inay tahay qof hadalkeeda kulul yahay sidoo kalena aan laga hoos bixin karin hadalada ay saxaafada shaqsiyaadka caanka ah ku weerarto.
Marka laga soo tago dhanka filim jilista Kareena sidoo kale barnaamijyo TV-yada ka baxaan ayay marti ahaan uga soo muuqataa sidoo kalena xirfadeeda kale waxaa ka mid ah inay aad ugu wanaagsan tahay dhanka Model-ka iyo Fashion-ka.
Haka reebin inay leedahay shirkad iyada u gaar ah oo sameyso dharka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena shirkada Globus oo dharka sameyso ayay safiir u tahay.
Kareena waxay wax ka qortay sedex buug oo kala duwan kuwaas oo xiiso gaar ah leh, mid wuxuu ka hadlaa nolosheeda oo kooban halka labada kalena ay yihiin kuwo dadka ku hagaan sida ay u qaadan lahaayeen nafaqo dhinac walbo ka tayeysan.
Bilawgii Nolosha Kareena iyo Marxaladaha Ay Soo Martay
Xidigtan waxay kasoo jeeda qoyska Bollywood-ka ugu awooda badan (Kapoor Family) waxayna ku dhalatay magaalada 21 September 1980.
Kareena aabaheed iyo hooyadeed waa labo jilaa oo 70-kii Bollywood caan ka ahaayeen Randhir Kapoor iyo Babita sidoo kalena Kareena waxay walaalo yihiin Karishma Kapoor oo ah da’da ka weyn.
Kareena waxaa awoowe u ah Super Star-ka weynaa Raj Kapoor halka uu adeer u yahay Rishi Kapoor halka ay ilmo adeero yihiin Ranbir Kapoor.
Sida laga soo xigtay Babita oo ah Kareena Kapoor hooyadeed magaca xidigtan waxaa laga soo min guuriyyay buuga (Anna Karenina) oo ah hooyadeed aqrisan jirtay markii ay uurkeeda laheyd.
Asal ahaan Kareena waxay kasoo jeeda Punjab madaama aabaheed aabaheed iyo awoowayaasheed ay reer Punjab ahaayeen, markii ay dhalin yareed Kareena diinta Hinduuga ayay heesan jirtay balse marka ay weenaatay hooyadeed ayay ka raaday dhanka diinta Masiixiga inkastoo haatan Kareena ay tahay Hindu hadana labada diimood ayay isku heesataa.
Kareena ayadoo caruur ah ayay dadka u muujin jirtay xiisaha ay u qabtay mar un atirisho mustaqbalka noqoto waxayna xiiseen jirtay daawashada aflaanta ay jileen atirishooyinkii birisamaadka Nargis iyo Meena Kumari.
Kareena aabaheed marnaba uma ogoleyn in gabdhahiisa ay fanka kusoo biiraan waayo qoyska reer Kapoor waxaa dhaqan u ahayd in kaliya wiilashooda fanka kusoo biiraan balse gabdhaha loo diido.
Midaas waxay abuurtay qilaaf oo kala dhex galay qoyska Kareena weliba aabaheed iyo hooyadeed nolosha ay ku kala guureen oo labo meel ayay kala dageen madaama hooyadeed ay rabtay in gabdhaheeda ay fanka ku biiraan.
Kareena hooyadeed ayaa soo bar baarisay waxayna Babita qaban jirtay hawlo kala duwan si nolosha labadeed gabdhood Karishma iyo Kareena u maareyso.
Markii dambe masuuliyada qoyska waxaa la wareegtay Karishma Kapoor oo sanadii 1991 Bollywood-ka kusoo biirtay sidoo kalena noqotay xidig caan ah oo lacago badan ku shaqeyso.
Kadib markii mudo badan ay qoyska Kareena labo meel ku kala noolaayeen sanadii 2007 ayay dib u midoobeen Randhir Kapoor iyo Babita waxaana isku keeeneen Kareena iyo Karishma oo door weyn ka cayaareen in xurguftii dhex tiilay waalidkooda ay meesha ka saaraan!
Kareena yaraanteedii waxay ka bilaawday waxbarashada Jamnabai Narsee School ee ku yaalo magaalada Mumbai kadib waxaa u xigay inay usii dalcaday Welham Girls’ School ee xaafada Dehradum ku yiilay.
Waxaa la sheegay in Kareena maadada xisaabta oo kaliya ay bundoo fiican ka keeni jirtay halka maadooyinka kale ay ku liidan jirtay.
Dhanka waxbarashada sare waxay labo sano ku qaadatay Mithibai College oo ku yaalo Mumbai waxayna ka qaadatay shahaadada dhanka ganacsiga.
Kadib Kapoor waxay sedex bilood koorso dhanka computer-ka lagu baranaayo ay kusoo qaadatay Harvard University, USA, xidigtan dadaalkeeda halkaas kuma ekeyn waxay iska qortay sidoo kalena hal sano dhigatay jamaacada qaranka Hindiya ee sharciga lagu barto, laakiin kuma waarin hal sano kadib waxbarashadii wey isaga hartay waxayna xooga saartay sidii ay atirisho ku noqon laheyd.
Kadib Kareena waxay iska qortay oo ay waxbarasho dhanka fanka iyo filim jilista ka bilaawday Film and Television Institute of India (FTII) waana machad weyn oo lagu barto fanka noocyadiisa kala duwan.
Kareena Markii Ay Kusoo Biirtay Bollywood-ka Sare U Kicii Ay Sameeyay Iyo Hoos U Dhicii Qabsaday (2000 – 2003)
Intii ay Kareena wax ka bareensay machadka Film and Television Institute of India (FTII) waxay heshiis la gaartay filim sameeye Rakesh Roshan sidii ay filimkiisa Kaho Naa… Pyaar Hai atirisho kowaad uga noqon laheyd.
Maalmo badan markii ay filimkan wax ka duubtay ayay Kareena isaga baxday gabi ahaanba Kaho Naa… Pyaar Hai! Sababta ay filimkan uga baxday ayaa muran badan dhaliyay sidoo kalena dhaawac u geestay xiriirkaa wanaagsanaa ee ka dhaxeeyay Rakesh Roshan iyo reer Kapoor.
Kareena ayaa mar dambe arinkan ka hadashay waxayna tiri “Faa’iido badan ayaan ka helay inaan sameynin Kaho Naa… Pyaar Hai waayo Rakesh Roshan ahmiyada oo dhan wuxuu siiyay wiilkiisa!”
Kareena sanadii 2000 ayay si rasmi ah Bollywood-ka ugu soo biirtay waxayna kusoo caan baxday filimkii Refugee oo ay Abhishek Bachchan isla jileen waxayna ahaayeen labo xidig oo fanka ku cusub.
Kareena filimka Refugee amaan badan ayay ku heshay sidoo kelana abaal marinta atirishada Bollywood-ka ku cusub ee ugu wanaagsan ayaa la siiyay waxaana siisay shirkada Filmfare Awards.
Refugee guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray laakiin aqoonsigii ay u baahneed ayay Kareena ku heshay filimkan waxayna mardame ka hadashay sidii ay fanka kusoo gashay “Refugee waa filim ii qaas ah sidoo kalena aan waaya aragnimo badan ku helay madaama uu ahaa sheeko dhib badan”
“Waxaan si gaar ah u hilmaami karin abaalkii uu Suniel Shetty ii galay waayo markii ugu horeesay ee aan shaashada hor imid cabsi weyn ayaa igu jirtay laakiin asiga ayaa i dhiiri galiyay ina tusay in wax walbo ay sahlan yihiin”
“Sunil qof iga fog ma uusan ahayn maalin walbo ayuu ila joogi jiray xitaa asigoo shaqadiisa dhameestay waayo agtiisa waxaan ka ahaa gabar yar oo wheel u baahan madaama aan yaraanteydii marwalbo arki jiray asiga iyo Karishma oo wada shaqeenayo”
Filimkeedii labaad Kareena Kapoor wuxuu ahaa Mujhe Kucch Kehna Hai (2001) waxaana filimkan lagu soo caan bixinaayay Tushar Kapoor, filimkan guul weyn ayuu gaaray wuxuu noqday Super Hit weliba dadka aflaanta ka faaloodo waxay ka dhawaajiyeen in 100% Kareena ay sabab u ahayd guusha Mujhe Kucch Kehna Hai.
Isla sanadii 2001 waxay sameesay filimkii Yaadein oo ay Hrithik Roshan iyo Jackie Shroff la jishay balse filimkan wuu guul dareestay inkastoo doorkeedii lagu amaanay.
Filimkeedii 4-aad Kareena wuxuu ahaa Ajnabee oo ay Bobby Deol iyo Akshay Kumar la jishay wuxuuna filimkan gaaray guul dhex dhexaad ah.
Kareena dadaalkeedii intaas kuma ekeyn filimkii Asoka ayay SRK la sameesay weliba ayadoo fanka ku cusub ayay qaadatay door dhib badan si wacan ayaa loogu amaanay inkastoo filimkan uu guul dareestay hadana Asoka wuxuu u suura galiyay in Kareena ay u tartanto abaal marinta atirishada ugu wanagsan oo ay Filmfare bixiso.
Sanadii 2000 Kareena waxay kusoo qatintay filimkii Classic ahaa sidoo kalena Blockbuster-ka weyn noqday Kabhi Khushi Kabhie Gham, guushii uu gaaray filimkan wuxuu ka caawiyay ayadoo mudo kooban Bollywood-ka ku jirto inay noqoto atirishada ugu qaalisan waxayna halkii filim ku sameyn jirtay 1.5 Crore ($230,000).
Kareena Kapoor wixii ka dambeeyay 2001 hoos u dhac xoogan ayaa qabsaday weliba xidigtan 6-filim oo ay sameesay mudo labo sano gudaheeda dhamaantooda wey guul dareesteen Mujhse Dosti Karoge!, Jeena Sirf Merre Liye, Talaash, Khushi, Main Prem Ki Diwani Hoon iyo LOC Kargil.
Kareena Markii Ay Bilaawday Sameynta Doorarka Kala Duwan Iyo Maamuuska Ay Heshay (2004 – 2006)
Kareena oo xaalka ku xun yahay sanadii 2004 waxay sameesay filimkii Chameli inkastoo filimkan Flop noqday hadana aqoonsi caalami ah ayay ku heshay sidoo kalena bilado badan ayay ku qaadatay madaama ay ku jileesay gabar jirkeeda ka ganacsato.
Doorarkan oo kale atirishooyinka waxay sameeyaan markii ay fanka waaya arag ku noqdaan sidoo kalena da’dooda 30-sano gaarto laakiin Kareena ayadoo aad u dhalin yar ayay si geesinimo ku dheehan doorkii filimka Chameli dadka kaga yaabsatay!
Weliba gudiga abaal marinada qiimeeyaan ee Filmfare Awards waxay ku noqotay ceeb in Kareena abaal marin la’aan la dhigo sanadii 2004 waxayna siiyeen abaal marin qaas ah (special jury recognition) madaaama bandhigeedii Chameli aad loola yaabay!
Kapoor waxay bilaawday sameynta filimo aan looga baranin kuwaas oo amaan balaaran ku heshay inkastoo ay guul dareesteen waxaana ka mid ah Yuva (2004), Dev (2004) iyo Fida (2004).
Filimkii Hulchul oo ay Akshaye Khanna la jishay ayaa Hit weyn u noqday Kareena waxayna ahayd marki ugu horeesay mudo sedex sano kadib ay filim Hit ah sameyso!
Wixii markaas ka dambeeyay Kareena waxay sameesay aflaan guulo dhex dhexaad ah gaareen oo ay ka mid yihiin Aitraaz, Chup Chup Ke, 36 China Town iyo kuwo kale.
Laakiin sanadii 2006 Kareena doorkeedii filimka Omkara ayay markale kusoo laba kacleesay waxayna ku heshay soo dhaweyn balaaran.
Wixii markaas ka dambeeyay Kareena si ku meel ah ayay shaqada filim jilista u yareesay waxayna tiri “Shaqo aad u fara badan ayaan qabtay anigoo fanka mudo gaaban ku dhex jiro sidaa darteed waa inaan nastaa”
“Xiiso weyn ayaan u qabay sameyna filimada dabcan wey jiraan filimo aan dib uga qoomameeyay sameyntooda xaga lacagaha”
“Maanta wixii ka dambeeyo waxaan noqon doonaa qof shaqadeeda yareyso sidoo kalena xulato sameynta aflaanta tayada wanaagsan”
Kareena Markii Ay Noqotay Super Star-da Bollywood-ka Iyo Waayaheedii Ugu Wacnaa (2007 – 2011)
2007 waa sanad qaas u ah Kareena Kapoor waxayna Bollywood-ka ku qabsatay filimkii Jab We Met weliba doorkeedii Geet Dhillon waa mid Classic ah oo ilaa haatan laga sheekeeyo.
Jab We Met waxay Kareena isla jileen Shahid Kapoor filimkan ayaa guul weyn gaaray sidoo kalena abaal marinta atirishada ugu wanaagsan ayay Kareena ku qaadatay waxaana siisay shirkada Filmfare Awards.
Kapoor waxay bilaawday inay noqoto hormuudka atirishooyinka Bollywood-ka sidoo kalena sanad walbo ay la timaado filim Hit dhameestiran noqdo waxayna sanadii 2008 sameesay filimkii shactirada aha Golmaal Returns oo Hit weyn noqday.
Laakiin sanadii 2009 filimkeedii 3 Idiots oo ay Aamir Khan isla jileen wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyo oo ay ebid Bollywood-ka sameeyaan asigoo soo xareeyay 202 Crore ($31 million).
Kareena sanad walbo waa wax dabiici u ah in filim weyn la timaado waxayna sanadii 2010 xidigtay la sameesay Ajay Devgan filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Golmaal 3.
Sidoo kale sanadii 2010 filimkii Ra.One ee Hit-ka noqday ayay SRK la sameesay halka 2012 uu qaas u ahaa madaama filimkii Bodyguard uu ay Salman Khan la jishay uu wacdaro weyn dhigay sidoo kalena uu Blockbuster noqday.
Kareena sanadii 2013 sanad wanaagsan uma ahayd madaama labadeedii filim Satyagraha iyo Gori Tere Pyaar Mein ay guul dareesteen.
Xidigtan la wada jecel yahay sanadii 2014 waxay Ajay Devgan la sameesay filimka weyn ee Singham Returns kaasi oo Super Hit noqday.
Bebo sanadkan 2015 waxay Salman Khan la sameesay filimka hir galay ee guusha taariikhiga ah gaaray Bajrangi Bhaijaan weliba filimkan wuxuu noqday 14-sano ee ugu dambeesay filimka loogu daawasho badan yahay gudaha Hindiya.
Kareena Marka Hawlaha Yareesay Iyo Hooyo Noqosheeda
Kareena Kapoor markii 2015 lasoo galay wey iska yareesay sameynta aflaanta sidaa darteed sanadii 2016 waxay sameeyay labo filim oo kaliya.
Arjun Kapoor ayay la sameeyay filimkii guusha wacan gaaray ee Semi Hit-ka noqday Ki & Ka waxaana Director ka ahaa R Balki waana filim sheekadiisa lasoo dhaweeyay lana daawaday horaantii April 2016.
Sidoo kale Kareena waxay la timid filimkii muranka badan dhaliyay Udta Punjab qaybtii dambe ee 2016 waxaana la jileen Shahid Kapoor, Alia Bhatt iyo Diljit Dosanjh.
Filimka Udta Punjab guul dhex dhexaad ah ayuu gaaray wuxuu noqday Average sidoo kalena filimkaan fariintiisa darooga dhibaatada ay ku heyso dhalinta gobolka Punjab iyo sida aysan dowlada wax kaga qabanin ayaa sababtay in aad loo hadal haayay abaal marino kala duwana lagu qaatay.
Kareena Kapoor Khan waxay hooyo noqotay 20-kii December 2016, mudadii ay uurka laheyd wax filim ah ma sameynin waxaana hada u joogo wiil loo bixiyay Taimur Ali Khan.
Kareena Kapoor hada shaqada filim jilista ayay dib ugu soo laabatay waxayna duubeysaa filimka Veere Di Wedding, oo ay isla jilayaan Sonam Kapoor qorshahana wuxuu yahay in 2018 la daawado, sidaa darteed 2017 oo dhan wax filim ah xidigtaan uma soo baxaayo
Bebo Iyo Hawlaha Kala Duwan Oo Ay Qabatay Marka Laga Soo Tago Shaqadeeda Fanka
Kareena waa atirishadii ugu horeesay ee sameesatay shirkad iibiso dharka kala duwan ee dumarka ku labistaan sidoo kalena waxay la shaqeysaa shirkada weyn Globus ee dharka sameyso.
Sanadii 2009 Kareena waxay la shaqeesay qoraaga caanka ah Rujuta Diwekar ee dhanka nafaqada wax ka qoro waxayna labadooda si wadajir ah u soo saareen buuga lagu magacaabo Don’t Lose Your Mind, Lose Your Weight.
Buugaagan ayaa ka hadlaayay sida caafimada ku jiro ee raashiinka loo cunom buugan siweyn ayaa loo soo dhaweeyay weliba 10,000 oo copy ayaa laga iibiyay 20-kiisii maalmood ee ugu horeesay!
Kapoor sidoo kale waxay soo saartay buugii Women and The Weight Loss Tamasha sanadii 2011 wuxuuna ka hadlaayay talooyinka dumarka ay miisaanka ku lumin karaan iyo cunista raashiin caafimaad laga heli karo.
Kadib xidigtan waxay soo saartay buug ka hadlaayay nolosheeda dhanka Model-ka iyo arimo kale ee lagu magacaabo The Style Diary of a Bollywood Diva.
Kareena Kapoor Iyo Nolosheeda Gaarka Ah:
Kareena Kapoor waxay nolosha la wadaagtaa Saif Ali Khan oo ay sanadii 2012 si rasmi ah u aqal galeen kadib markii ay mudo 5-sano ah xiriir jeceyl wada jilayeen.
Kareena waxay si rasmi ah hooyo u noqotay 20 December 2016 kadib markii ay wiil ku curatay waxaana wiilkeeda loo bixiyay Taimur Ali Khan.
Xidigtan bilawgii nolosheedii waxaa lagu xaman jiray markii ay fanka kusoo biirtay inay Hrithik Roshan xiriir la yeelatay balse marnaba labada dhinac si rasmi ah uma xaqiijinin.
Kareena Kapoor waxay Shahid Kapoor la wadaagtay xiriirkii jeceyl ee ugu hadal heyntaa badnaa Bollyood-ka ebid.
Waxayna Shahid iyo Kareena saaxiibo ahaayeen intii u dhaxeesay 2004 ilaa 2007 laakiin labadan lamaane si lama filaan ah ayay nolosha isugu firaaqeeyeen.
Kareena haatan waa marwalbo maqaam sare ku leh Bollywood-ka sidoo kalena u qalbi furan inay qof walbo la shaqeyso.
Waxaana xiiso gaar ah leh in sanad 2016 Kareena iyo Shahid Kapoor kasoo wada muuqdeen filimka Udta Punjab mudo 8-sano kadib ayay wada shaqeeyeen sidoo kalena filimkaan jaceel kuma wadaagin laakiin wey isla xayeysiiyeen waxayna meel fagaaro ah ka sheegeen inay xushmad isku hayaan wixii horena laga soo gudbay.
Waxaa Aqrisay 3,871